MUQDISHO, Soomaaliya - Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay, 14 kale, oo 6 kamid ah ay yihiin caruur iyo macalinkooda ayaa ku dhaawacmay kadib Qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho, maanta oo Axad ah.
Qaraxa oo ahaa mid aad u cuslaa ayaa wuxuu geysatay burbur xoog leh oo soo gaarey dhismayaal ka ag-dhawaa halka uu ka dhacay, waxaana gabi ahaanba burburay Masjid, Dugsi Qur'aan iyo dhismaha xarunta degmada Howlwadaag.
Caruurta ku dhawacantay qaraxa ayaa la tilmaamay inay ku jireen Dugsiga burburay, halka macalinkooda uu ku wehlinayey, sida uu Warsidaha Garowe Online u sheegay qof kamid ahaa dadkii ugu horeeyay ee tagay goobta uu qaraxu ka dhacay.
Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka, balse, Gudoomiyaha degmada Howlwadaag oo gudaha dhismaa ku jiray ayaa wuxuu ku eedeeyay inay ka dambeysay kooxda Al-Shabaab, isaga oo tilmaamay inuu badqabo isaga.
Qaraxaan ayaa wuxuu noqonayaa midkii ugu horeeyay oo Ismiidaamin ah, oo bishan September ka dhacay Magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho, wuxuuna kusoo beegmayaa xili amaanka caasimadda lagu wareejiyay Booliska Soomaaliya.
Shalay ayey ahayd markii Qarax gaari lagu soo xiray uu ka dhacay degmada Dharkenley, kaasoo la doonayay in lagu dilo Gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose, balse ka badbaay weerarka.
Waxaa mas'uuliyada weerarkii shalay ee degmada Dharkeenlay sheegatay Kooxda Al-Shabaab, ee xiriirka la leh Al-Qaacida. [Halkan ka akhri warka]
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in qaraxa uu xigay rasaas xooggan oo laga maqlayay...